Ndị Afghanistan chụpụrụ na Uganda natara: Gịnị kpatara ụlọ oriri na ọ happyụ ?ụ ji adị ụtọ?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Ndị Afghanistan chụpụrụ na Uganda natara: Gịnị kpatara ụlọ oriri na ọ happyụ ?ụ ji adị ụtọ?
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Ndị mgbapụ Afghanistan nabatara na Uganda
Gọọmentị Uganda nwere n'ụtụtụ a, Ọgọst 25, 2021, nabatara mmadụ 51 n'ime ndị gbara ọsọ ndụ 2,000 a tụrụ anya na ha si Afghanistan bịarutere n'ụgbọ elu nkeonwe gbaziri na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Entebbe.
Hotels dị na Entebbe na-atụ anya oke ikuku site na ntinye akwụkwọ ebe ọkwa ndị bi na ya gbadara n'ihi ọrịa COVID-19 na 2020.
Ndị ọchụnta ego nyochara nchekwa nchekwa dị mkpa yana nnwale COVID-19 dị mkpa yana usoro ịpụ iche.
Ndị ọpụpụ Uganda a tụrụ anya na ha ga -eji ụgbọ elu eme njem enweghị ike ime ya n'ihi ihe ịma aka ịbanye n'ọdụ ụgbọ elu dị na Kabul.
Nke a na -esote arịrịọ sitere n'aka gọọmentị US na nnabata nke gọọmentị Uganda ịnabata ndị mba Afghanistan nwa oge na -ebuga United States of America na ebe ndị ọzọ n'ụwa niile na -eso. iweghara ọchịchị Afghanistan site n'aka ndị Taliban.
Nkwupụta sitere na Ministry of Foreign Affairs na Kampala gụrụ akụkụ ya:
“Uganda na United States na -enwe mmekọrịta dị ogologo na mmekọrịta abụọ nke bụ akụkọ mere eme na -aga n'ihu na -achụso ọdịmma maka ọdịmma nke mba abụọ a. Ọ bụ ọrụ gọọmentị Uganda na -agwa mkpebi ịnabata ndị nọ na mkpa n'ihe metụtara mba ụwa niile. ”
Na -agbakwụnye mmegharị nke gọọmentị Uganda, Ụlọ ọrụ US Embassy na Uganda tweeted: “Ndị Uganda nwere ọdịnala kemgbe ịnabata ndị gbara ọsọ ndụ na obodo ndị ọzọ nọ na mkpa. Dị ka onye na -akwado ndị gbara ọsọ ndụ na Uganda na obodo ndị ọbịa ha na Uganda, United States na -egosipụta ekele ya maka ndị Uganda. Gọọmentị Uganda egosipụtakwala ọzọ ịdị njikere ikere òkè ya n'okwu metụtara mba ụwa. Anyị na -aja mbọ ya na ndị otu obodo na mba dị na Uganda mma ”…
Ndị a chụpụrụ, gụnyere ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, na ụmụaka, mere nyocha nchekwa dị mkpa yana nnwale COVID-19 dị mkpa yana usoro ịpụ iche chọrọ.
Ndị Uganda gbapụrụ bụ ndị a ga -eji ụgbọ elu eme njem enweghị ike ime ya n'ihi ihe ịma aka nke ịbanye n'ọdụ ụgbọ elu dị na Kabul.
Tupu ha abịarute, Minista mba ofesi Uganda Gen. Jeje Odongo mgbe a jụrụ ya onye ga -akwụ ụgwọ maka nlekọta ya na mkparịta ụka televishọn ya na Larry Madowoon, CNN, nwere nke a ikwu, "Anyị maara nhụjuanya nke ndị gbara ọsọ ndụ, na mba n'ime obodo nke mba dị iche iche, anyị nwere ọrụ dịịrị mba ụwa, ihe ngosi na mkparịta ụka anyị na -egosi ugbu a na America ga -ebu ọrụ. "
Ụlọ oriri na nkwari akụ na Entebbe na-atụ anya na ikuku ga-ada site na ntinye akwụkwọ ebe ọkwa ndị bi na ya gbadara n'ihi ọrịa COVID-19 na 2020. Carol Natkunda, onye nwe Askay Hotel Entebbe, kwupụtara nchekwube na ụlọ nkwari akụ ya ga-enweta ndị ọbịa a pụrụ iche na-emesi obi ike. eTurboNews na ha na -etinye usoro ọrụ arụmọrụ niile dị mkpa ebe ọ bụla kemgbe ọrịa ọjọọ bidoro.
Uganda agbanweela site na ịbụ isi mmalite ka ọ bụrụ onye ọbịa maka ọnụ ọgụgụ kacha ukwuu nke ndị gbara ọsọ ndụ n'Africa - ruru nde 1.5 - tumadi site na South Sudan, Democratic Republic of Congo (DRC), Burundi, na Somalia.
N'ime ọgụ megide ọchịchị ịkpa ókè agbụrụ na South Africa na 1989, gọọmentị Uganda nyere ntọala maka ndị a chụpụrụ na South Africa bụ ndị guzobere ntọala maka ndị nnwere onwe nnwere onwe (Umkonto we Sizwe) nke African National Congress (ANC). Mmadụ iri na anọ n'ime ndị agha ka nọ n'ụlọ akwụkwọ Oliver Reginald Tambo ANC Leadership, Kaweweta.
Laa azụ n'oge Agha IIwa nke Abụọ mgbe ndị German Blitzkrieg nwere ọtụtụ Europe, a manyere 7,000 Polish - ọkachasị ụmụ nwanyị na ụmụaka gbara ọsọ ndụ - ịgbaba na Nyabyeya na Masindi District na Koja (Mpunge) na Mukono District na British Protectorate nke ahụ. Uganda. Ọ bụghị ihe a na -ahụkarị ịhụ ndị ikwu ha na ụmụ ha ka ha na -asọpụrụ n'ili ndị ikwu ha nke e liri na Uganda.